ပိတ်ရက်အပျော်ခရီးဆိုင်ရာ ဝေါဟာရများ (Holiday Vocabulary) - Myanmar Network
ပိတ်ရက်အပျော်ခရီးဆိုင်ရာ ဝေါဟာရများ (Holiday Vocabulary)
Posted by Soe Soe Win on March 21, 2014 at 11:32 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
"Flight", "tour" နှင့် "view" ကဲ့သို့သော စကားလုံးတစ်လုံးချင်းစီရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို သိကောင်းသိကြပါလိမ့်မည်။ သို့သော်လည်း သင့်ရဲ့ အဆင့်မြင့် အင်္ဂလိပ်စကားကို ပေါ်လွင်စေမဲ့ သော့ချက်ကတော့ ဒီစကားလုံးတစ်လုံးချင်းတွေ ကို တခြားစကားလုံးတွေနဲ့ တွဲဖက်ပြီး အသုံးပြုနေကျ စကားအသုံးအနှုန်းအဖြစ် အသုံးပြုပြနိုင်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ဖော်ပြပါ IELTS ပုံစံ အမေးအဖြေများကို လေ့လာကြည့်ပြီး စာလုံးမည်း (bold) ဖြင့် ဖော်ပြထားသော စကားအသုံးအနှုန်းတို့ကို အထူးဂရုပြုပါ။ သင် နားမလည်သော အသုံးအနှုန်းများ၏ အဓိပ္ပါယ်ကို ဒီစာမျက်နှာရဲ့ အောက်ဆုံးမှာပါတဲ့ ဝေါဟာရများကဏ္ဍ (Definition Section) မှာ ရှာဖွေကြည့်ပါ။
အပိုင်း ၁ - ပုံစံမေးခွန်းများ (Part 1 - Style questions)
Examiner (စာစစ်သူ) : What kind of holidays do you like? (ဘယ်လိုမျိုး ပိတ်ရက်အပျော်ခရီးကို ကြိုက်ပါသလဲ?)
Migule : I try to avoid tourist traps….I like to get away from it all and prefer going somewhere off the beaten track…Last year I had the holiday ofalifetime….a two week wildlife safari in Kenya.
(ကျွန်တော်ကတော့ ခရီးသွားအများကြီးသွားတတ်တဲ့ နေရာမျိုးကို တတ်နိုင်သမျှ ကြိုးစားပြီး ရှောင်တယ်….အားလုံးနဲ့ ဝေးရာ အခြားမှာ နားအေးပါးအေးနေရတာ ကြိုက်ပြီးတော့ လူသူအရောက်အပေါက်နည်းတဲ့နေရာ…တစ်နေရာရာကို သွားရတာ ပိုနှစ်သက်တယ်….. မနှစ်ကတော့ ကြုံတောင့်ကြုံခဲ အပျော်ခရီးသွားလိုက်ရတယ်… Kenya မှာ တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန် တွေကို လေ့လာရတဲ့ အပျော်ခရီးလေ….(၂)ပတ်တောင်ကြာခဲ့တယ်။)
Examiner : What do you like to do when you are on holiday? (ပိတ်ရက် အပျော်ခရီးသွားရင် ဘာလုပ်ရတာ ကြိုက်သလဲ?)
Anna : I enjory visiting the local places of interest….I like to go sightseeing and always sign up for guided tours as it’sachance to be shown around and take photographs…..one of my hobbies.
(ကျွန်မအနေနဲ့ကတော့ ဒေသတွင်း စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့နေရာကို သွားရတာ နှစ်သက်ပါတယ်…ရှုခင်းများကို လည်ပတ်ကြည့်ရှုရတာကို ကြိုက်တဲ့အတွက် လမ်းပြပါတဲ့ လှည့်လည်သွားရတဲ့ ခရီးမှာ အမြဲစာရင်းပေးတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒါဟာ သူများလိုက် ပြတာကို ခံရပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရတဲ့ အခွင့်အရေးပဲလေ…ဓာတ်ပုံရိုက်ရတာက ကျွန်မရဲ့ ၀ါသနာတစ်ခုပဲလေ။)
Examiner : Do you have many tourists in your country? (မင်းနိုင်ငံကို ခရီးသွားတွေအများကြီးလာကြ သလား?)
Amy : Yes….we havealot of holiday resorts along the coast that are popular with tourists…..most people come on package holidays and stay in one of the many hotels and self-catering apartments.
(ဟုတ်ကဲ့ လာပါတယ်…ကျွန်မတို့ဆီမှာ ပင်လယ်ကမ်းခြေ တစ်လျှောက် ခရီးသွားများ နှစ်သက်တဲ့ ခရီးသွားအပန်းဖြေစခန်းတွေ အများကြီးရှိပါ တယ်။ လူအများစုကတော့ ၀န်ဆောင်ခ ပုတ်ပြတ်နှုန်းနဲ့ ပို့ဆောင်တည်းခိုမှုကို တာဝန်ယူပေးတဲ့ အပျော်ခရီးစဉ်နဲ့ လာကြပြီး ဟိုတယ်တစ်ခုခု ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ချက်ပြုတ် စားသောက်လို့ရတဲ့ တိုက်ခန်းတွေမှာ နေပါတယ်။)
အပိုင် ၂ - ပုံစံလုပ်ဆောင်ချက် (Part2- style task)
သင်သွားရောက် လည်ခဲ့ဖူးသော သာယာလှပသည့် နေရာတစ်နေရာအကြောင်း ပြောပြပါ။ (Describeabeautiful place you once visited.) အဲဒီအခါမှာ သင့်အနေနဲ့ အောက်ပါ အချက်များပါအောင် ပြောပြပါ။
when you went to this place. (သင် ၄င်းနေရာကို ဘယ်တုန်းက သွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်)
where it is. (ဘယ်မှာ တည်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်)
who you went with. (ဘယ်သူနဲ့ သွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်)
why you liked it so much. (ဘာ့ကြောင့် အဲဒီလောက်တောင် ကြိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်း)
Sally : A few years ago I went onalong weekend to the Lake District….It'savery popular holiday destination in the north of England…I went on my own and hadawonderful time….I stayed inayouth hostel and met some really nice people…..but the most memorable thing about the holiday were the breathtaking views and lovely picturesque villages…..it can get very busy with hordes of tourists so I decided to go out of season in the autumn …..the weather was fantastic and the shops were full of local craftsareally greal holiday…..it's certainly not the kind of short break for someone looking forabusy nightlife but if you want to relax in the middle of stunning landscape I would certainly recommendaholiday to the Lake District.
(လွန်ခဲ့သော နှစ်အနည်းငယ်က Lake District ကို ရက်ရှည်ခရီး သွားခဲ့ပါတယ်။ ၄င်းဟာ အင်္ဂလန်ရဲ့ မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ လူကြိုက်များတဲ့ အပျော်ခရီးထွက်ရတဲ့နေရာ တစ်နေရာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မဟာ တစ်ယောက်တည်းသွားခဲ့ပြီး ပျော်စရာအချိန်တွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မဟာ ဈေးသက်သာပြီး ခရီးသွားလူငယ်တွေအတွက် အဓိကထားဖွင့်တဲ့ တည်းခိုခန်းမှာ နေခဲ့ပြီး သဘောကောင်းတဲ့လူအချို့နဲ့ ဆုံခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီအပျော်ခရီးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမှတ်အရဆုံးအရာကတော့ အသက်ရှူမှားလောက်စေတဲ့ မြင်ကွင်းများနှင့် မျက်စိပဒါသဖြစ်စေသော ရွာများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုနေရာသည် ခရီးသွားလူ အုပ်ကြီးတွေနဲ့ ရှုပ်ယှက်ခတ်နေတတ်တဲ့အတွက် ကျွန်မက အသွားအလာပါးသည့်အချိန်ဖြစ်တဲ့ ဆောင်းဦးမှာ သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ရာသီဥတုက အလွန်ကောင်းပြီး ဆိုင်တွေကလည်း ဒေသထုတ်လက်မှုပစ္စည်းများနဲ့ ပြည့်နေပါတယ်။ တကယ့်ကို ကောင်းမွန်တဲ့ အပျော်ခရီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ လှုပ်ရှားနေတဲ့ ညပွဲလမ်းသဘင်ကို ရှာဖွေနေတဲ့သူတစ်ယောက် လိုလားတဲ့ ပျော်စရာ ခရီးတိုမျိုးတော့ မဟုတ်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရှုခင်းတွေကြားမှာ အပန်းဖြေချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ကျွန်မအနေနဲ့ Lake District ကို သွားပါလို့ အကြံပေးလိုပါတယ်။)
အပိုင်း ၃ - ပုံစံမေးခွန်း (Part3- style questions)
Examiner : What do you think has led to the growth in tourist industry? (ဘာကြောင့် ခရီးသွား လုပ်ငန်းဟာ တိုးတက်လာတယ်လို့ ထင်ပါသလဲ?)
Miguel : It's much easier and affordable now….nowadays you can get cheap charter flights or all-in packages……to some where near or toafar-off destination.
(အခုအခါမှာဆိုရင် ခရီးသွား ရတာ ပိုလွယ်ကူပြီး စရိတ်ကလည်း တတ်နိုင်လာကြပြီလေ….အခုခေတ်မှာ ဈေးသက်သာပြီး စင်းလုံးငှားလို့ရတဲ့ လေယာဉ်တွေ (သို့) နီးတဲ့နေရာ (သို့) ဝေးလံတဲ့နေရာကို လေယာဉ် လက်မှတ်ကအစ သွားလာ နေထိုင်မှုစရိတ်ငြိမ်းဝန်ဆောင်မှုနဲ့ ပို့ပေးတဲ့ အပျော်ခရီး တွေကို ရနိုင်ပြီလေ။)
Examiner : How do people tend to chooseadestination? (လူတွေဟာ အပျော်ခရီးထွက်ရမဲ့နေရာကို ဘယ်လို ရွေးချယ်လေ့ရှိသလဲ?)
Anna : The internet isagreat source of information and high street travel agents are still very popular….that's where I like to go to get holiday brodrures for the place I'm interested in.
(Internet ကတော့ အချက်အလက်ကောင်းကောင်း ရနိုင်တဲ့ ဇစ်မြစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး လမ်းမကြီး ပေါ်ရှိ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေကလည်း အခုအထိ လူကြိုက်များကြတုန်းပဲလေ။ ကျွန်မကတော့ ကျွန်မ စိတ်ဝင်စားတဲ့နေရာတစ်နေရာရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အပျော်ခရီးသွား ကြော်ငြာ လက်ကမ်း စာစောင်လိုချင်ရင် အဲဒီနေရာတွေကို သွားတယ်။)
Examiner : People sometimes say flying is the most glamorous form of travel. Do you agree? (တစ်ခါတရံ လူတွေက လေယာဉ်ပျံနဲ့ ခရီးသွားတာဟာ နှစ်သက်စရာ အကောင်းဆုံးသော နည်းလို့ ပြောကြတယ်။ အဲဒါကို သဘောတူလား?)
Amy : I'm not so sure really….flying can be quite boring…queuing up at the check-in desk….going through passport control sitting for ages in the departure lounge….then the flight itself can be quite uncomfortable – no – I'm not sure I agree.
(ကျွန်မ အသေအချာ တော့ မပြောနိုင်ဘူး….လေယာဉ်နဲ့ သွားရတာ အတော်လေး ငြီးငွေ့စရာကောင်း နိုင်တယ်…. အမည်စာရင်းပေးပြီး အထုပ်အပိုးအပ်ရတဲ့နေရာမှာ တန်းစီရတာ….နိုင်ငံကူး လက်မှတ် စစ်ဆေးတဲ့နေရာကို ဖြတ်သွားရတာ လေယာဉ်ထွက်ခွာဖို့စောင့်ရတဲ့ဧည့်ခန်းမှာ အကြာကြီး ထိုင်နေရတာ….အဲဒီနောက် လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကလည်း သက်သောင့်သက်သာမရှိတာ… ဟင့်အင်း…ကျွန်မ သဘောတူတယ်လို့ မပြောနိုင်ဘူး)
all-in package / package holiday - အပျော်ခရီးနှင့်တည်းခိုခြင်းကိုပါ တစ်ပါတည်းဝယ်ယူနိုင်တဲ့အပျော်ခရီး
breathtaking view - အလွန်တရာသာယာလှပသော ရှုခင်း
charter-flight - ပုံမှန် အစီအစဉ်နှင့် ပြေးဆွဲနေသော လေယာဉ်ခရီးစဉ်ထက်ပို၍ ဈေးသက်သာသော လေယာဉ်ဖြင့် ခရီးသွားနည်း
check-in desk - လေယာဉ်ကွင်းထဲရှိ မိမိခရီးစဉ်အတွက် စာရင်းပေးပြီး အထုပ်အပိုများအပ်ခဲ့ရသောနေရာ
departure lounge - မိမိလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကို ခေါ်ရန်အတွက် စောင့်ရသော နေရာ
far-off destination - အလွန်ဝေးကွာသော နေရာတစ်နေရာ
to get away from it all - အလုပ်များသော (သို့) စိတ် ဖိစီးမှုများနေသော လူနေမှုပုံစံကို ရှောင်ရှားရန် အပျော်ခရီးထွက်ခြင်း
guided tour - စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော နေရာများသို့ ကျွမ်းကျင်သူက လိုက်၍ ပြသခြင်းကို ခံရသော စံနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားသော ခရီးသွားအုပ်စု
holiday brochure - အပျော်ခရီးနှင့် တည်းခိုခြင်းပါ တစ်ပါတည်း ၀ယ်ယူနိုင်သည့် အပျော်ခရီးသွားခြင်းနှင့်ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေပါ တဲ့ ချောမွေ့ တောက်ပတဲ့ စက္ကူဖြင့် ရိုက်ထားသော လက်ကမ်းစာစောင်
holiday destination - အပျော်ခရီးထွက်သောနေရာ
holiday ofalifetime - နောက်ထပ် ထပ်ပြီးသွားနိုင်ဖို့ရာ အလားအလာမရှိသော ထူးခြားသည့် ပိတ်ရက်အပျော်ခရီးတစ်ခု
holiday resort - လူအများကြီး အပျော်ခရီးထွက်ကြသော နေရာတစ်နေရာ
hordes of tourists - ခရီးသွားအုပ်စုကြီးတွေ
local crafts - ဒေသမှ ထုတ်လုပ်သော လက်မှုပစ္စည်း။
long weekend - သောကြာ (သို့) တနင်္လာ ပါသော ရက်ရှည်သွားသည့် စနေ၊ တနင်္ဂနွေရုံးပိတ်ရက်
out of season - အဓိက ပိတ်ရက်ခရီးသွားရာသီ မဟုတ်သော အချိန်
picturesque village - အလွန်လှပတဲ့ရွာ
passport control - သင့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကို စစ်ဆေးသည့် နေရာ
places of interest - ခရီးသွားများအတွက် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော နေရာများ
wildlife safari - တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များကို လေ့လာ ရန်အတွက် သွားရတဲ့ ပိတ်ရက်အပျော်ခရီး၊ အဲဒါက အများအားဖြင့် အာဖရိကမှာ ဖြစ်ပါတယ်
self-calering - အစားအသောက်ကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဖြည့်ဆည်း ရတဲ့ ပိတ်ရက်ခရီးသွားခြင်း
short break - ရက်တိုပိတ်ရက် အပျော်ခရီး
to go sightseeing - ခရီးသွားများ စိတ်ဝင်စားစေမဲ့ နေရာများကို လိုက်လံ ကြည့်ရှုခြင်း
stunning landscape - အလွန်သာယာလှပသော ကျေးလက်ဒေသ
travel agent - ပိတ်ရက်အပျော်ခရီးထွက်ခြင်းအတွက် ကြိုတင် စာရင်းပေးသွင်းခြင်းကို အထူးဝန်ဆောင်မှုပေးသောဆိုင်
tourist trap - အလွန်များပြားလှသော ခရီးသွားများ သွားရောက် လည်ပတ်ကြသော နေရာတစ်နေရာ
youth hostel - ဈေးသက်သာစွာဖြင့် တည်းခိုနေထိုင်စရာ နေရာ
http://www.ieltsspeaking.co.uk/ielts-holiday-vocabulary/ မှ IELTS Holiday Vocabulary ကိုဘာသာပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
"Flight", "tour" နှငျ့ "view" ကဲ့သို့သော စကားလုံးတဈလုံးခငျြးစီရဲ့ အဓိပ်ပါယျကို သိကောငျးသိကွပါလိမျ့မညျ။ သို့သျောလညျး သငျ့ရဲ့ အဆငျ့မွငျ့ အင်ျဂလိပျစကားကို ပျေါလှငျစမေဲ့ သော့ခကျြကတော့ ဒီစကားလုံးတဈလုံးခငျြးတှေ ကို တခွားစကားလုံးတှနေဲ့ တှဲဖကျပွီး အသုံးပွုနကြေ စကားအသုံးအနှုနျးအဖွဈ အသုံးပွုပွနိုငျခွငျးပဲ ဖွဈပါတယျ။
အောကျဖျောပွပါ IELTS ပုံစံ အမေးအဖွမြေားကို လလေ့ာကွညျ့ပွီး စာလုံးမညျး (bold) ဖွငျ့ ဖျောပွထားသော စကားအသုံးအနှုနျးတို့ကို အထူးဂရုပွုပါ။ သငျ နားမလညျသော အသုံးအနှုနျးမြား၏ အဓိပ်ပါယျကို ဒီစာမကျြနှာရဲ့ အောကျဆုံးမှာပါတဲ့ ဝေါဟာရမြားကဏ်ဍ (Definition Section) မှာ ရှာဖှကွေညျ့ပါ။
အပိုငျး ၁ - ပုံစံမေးခှနျးမြား (Part 1 - Style questions)
Examiner (စာစဈသူ) : What kind of holidays do you like? (ဘယျလိုမြိုး ပိတျရကျအပြျောခရီးကို ကွိုကျပါသလဲ?)
(ကြှနျတျောကတော့ ခရီးသှားအမြားကွီးသှားတတျတဲ့ နရောမြိုးကို တတျနိုငျသမြှ ကွိုးစားပွီး ရှောငျတယျ….အားလုံးနဲ့ ဝေးရာ အခွားမှာ နားအေးပါးအေးနရေတာ ကွိုကျပွီးတော့ လူသူအရောကျအပေါကျနညျးတဲ့နရော…တဈနရောရာကို သှားရတာ ပိုနှဈသကျတယျ….. မနှဈကတော့ ကွုံတောငျ့ကွုံခဲ အပြျောခရီးသှားလိုကျရတယျ… Kenya မှာ တောရိုငျးတိရိစ်ဆာနျ တှကေို လလေ့ာရတဲ့ အပြျောခရီးလေ….(၂)ပတျတောငျကွာခဲ့တယျ။)
Examiner : What do you like to do when you are on holiday? (ပိတျရကျ အပြျောခရီးသှားရငျ ဘာလုပျရတာ ကွိုကျသလဲ?)
(ကြှနျမအနနေဲ့ကတော့ ဒသေတှငျး စိတျဝငျစားစရာကောငျးတဲ့နရောကို သှားရတာ နှဈသကျပါတယျ…ရှုခငျးမြားကို လညျပတျကွညျ့ရှုရတာကို ကွိုကျတဲ့အတှကျ လမျးပွပါတဲ့ လှညျ့လညျသှားရတဲ့ ခရီးမှာ အမွဲစာရငျးပေးတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ဒါဟာ သူမြားလိုကျ ပွတာကို ခံရပွီး ဓာတျပုံရိုကျလို့ရတဲ့ အခှငျ့အရေးပဲလေ…ဓာတျပုံရိုကျရတာက ကြှနျမရဲ့ ဝါသနာတဈခုပဲလေ။)
Examiner : Do you have many tourists in your country? (မငျးနိုငျငံကို ခရီးသှားတှအေမြားကွီးလာကွ သလား?)
(ဟုတျကဲ့ လာပါတယျ…ကြှနျမတို့ဆီမှာ ပငျလယျကမျးခွေ တဈလြှောကျ ခရီးသှားမြား နှဈသကျတဲ့ ခရီးသှားအပနျးဖွစေခနျးတှေ အမြားကွီးရှိပါ တယျ။ လူအမြားစုကတော့ ဝနျဆောငျခ ပုတျပွတျနှုနျးနဲ့ ပို့ဆောငျတညျးခိုမှုကို တာဝနျယူပေးတဲ့ အပြျောခရီးစဉျနဲ့ လာကွပွီး ဟိုတယျတဈခုခု ဒါမှမဟုတျ ကိုယျ့ဘာသာကိုယျ ခကျြပွုတျ စားသောကျလို့ရတဲ့ တိုကျခနျးတှမှော နပေါတယျ။)
အပိုငျ ၂ - ပုံစံလုပျဆောငျခကျြ (Part2- style task)
သငျသှားရောကျ လညျခဲ့ဖူးသော သာယာလှပသညျ့ နရောတဈနရောအကွောငျး ပွောပွပါ။ (Describeabeautiful place you once visited.) အဲဒီအခါမှာ သငျ့အနနေဲ့ အောကျပါ အခကျြမြားပါအောငျ ပွောပွပါ။
when you went to this place. (သငျ ၎င်းငျးနရောကို ဘယျတုနျးက သှားခဲ့တယျဆိုတဲ့အခကျြ)
where it is. (ဘယျမှာ တညျရှိတယျဆိုတဲ့အခကျြ)
who you went with. (ဘယျသူနဲ့ သှားခဲ့တယျဆိုတဲ့အခကျြ)
why you liked it so much. (ဘာ့ကွောငျ့ အဲဒီလောကျတောငျ ကွိုကျရတဲ့အကွောငျးရငျး)
(လှနျခဲ့သော နှဈအနညျးငယျက Lake District ကို ရကျရှညျခရီး သှားခဲ့ပါတယျ။ ၎င်းငျးဟာ အင်ျဂလနျရဲ့ မွောကျပိုငျးမှာရှိတဲ့ လူကွိုကျမြားတဲ့ အပြျောခရီးထှကျရတဲ့နရော တဈနရော ဖွဈပါတယျ။ ကြှနျမဟာ တဈယောကျတညျးသှားခဲ့ပွီး ပြျောစရာအခြိနျတှဖွေဈခဲ့ပါတယျ။ ကြှနျမဟာ ဈေးသကျသာပွီး ခရီးသှားလူငယျတှအေတှကျ အဓိကထားဖှငျ့တဲ့ တညျးခိုခနျးမှာ နခေဲ့ပွီး သဘောကောငျးတဲ့လူအခြို့နဲ့ ဆုံခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဒီအပြျောခရီးနဲ့ ပတျသကျပွီး အမှတျအရဆုံးအရာကတော့ အသကျရှူမှားလောကျစတေဲ့ မွငျကှငျးမြားနှငျ့ မကျြစိပဒါသဖွဈစသေော ရှာမြားပဲ ဖွဈပါတယျ။ ထိုနရောသညျ ခရီးသှားလူ အုပျကွီးတှနေဲ့ ရှုပျယှကျခတျနတေတျတဲ့အတှကျ ကြှနျမက အသှားအလာပါးသညျ့အခြိနျဖွဈတဲ့ ဆောငျးဦးမှာ သှားဖို့ ဆုံးဖွတျခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီအခြိနျမှာ ရာသီဥတုက အလှနျကောငျးပွီး ဆိုငျတှကေလညျး ဒသေထုတျလကျမှုပစ်စညျးမြားနဲ့ ပွညျ့နပေါတယျ။ တကယျ့ကို ကောငျးမှနျတဲ့ အပြျောခရီးဖွဈခဲ့ပါတယျ။ လှုပျရှားနတေဲ့ ညပှဲလမျးသဘငျကို ရှာဖှနေတေဲ့သူတဈယောကျ လိုလားတဲ့ ပြျောစရာ ခရီးတိုမြိုးတော့ မဟုတျပါ။ ဒါပမေဲ့ ရငျသပျရှုမောဖှယျရှုခငျးတှကွေားမှာ အပနျးဖွခေငျြတယျ ဆိုရငျတော့ ကြှနျမအနနေဲ့ Lake District ကို သှားပါလို့ အကွံပေးလိုပါတယျ။)
အပိုငျး ၃ - ပုံစံမေးခှနျး (Part3- style questions)
Examiner : What do you think has led to the growth in tourist industry? (ဘာကွောငျ့ ခရီးသှား လုပျငနျးဟာ တိုးတကျလာတယျလို့ ထငျပါသလဲ?)
(အခုအခါမှာဆိုရငျ ခရီးသှား ရတာ ပိုလှယျကူပွီး စရိတျကလညျး တတျနိုငျလာကွပွီလေ….အခုခတျေမှာ ဈေးသကျသာပွီး စငျးလုံးငှားလို့ရတဲ့ လယောဉျတှေ (သို့) နီးတဲ့နရော (သို့) ဝေးလံတဲ့နရောကို လယောဉျ လကျမှတျကအစ သှားလာ နထေိုငျမှုစရိတျငွိမျးဝနျဆောငျမှုနဲ့ ပို့ပေးတဲ့ အပြျောခရီး တှကေို ရနိုငျပွီလေ။)
Examiner : How do people tend to chooseadestination? (လူတှဟော အပြျောခရီးထှကျရမဲ့နရောကို ဘယျလို ရှေးခယျြလရှေိ့သလဲ?)
(Internet ကတော့ အခကျြအလကျကောငျးကောငျး ရနိုငျတဲ့ ဇဈမွဈတဈခုဖွဈပွီး လမျးမကွီး ပျေါရှိ ခရီးသှားလုပျငနျးတှကေလညျး အခုအထိ လူကွိုကျမြားကွတုနျးပဲလေ။ ကြှနျမကတော့ ကြှနျမ စိတျဝငျစားတဲ့နရောတဈနရောရာနဲ့ပတျသကျပွီး အပြျောခရီးသှား ကွျောငွာ လကျကမျး စာစောငျလိုခငျြရငျ အဲဒီနရောတှကေို သှားတယျ။)
Examiner : People sometimes say flying is the most glamorous form of travel. Do you agree? (တဈခါတရံ လူတှကေ လယောဉျပြံနဲ့ ခရီးသှားတာဟာ နှဈသကျစရာ အကောငျးဆုံးသော နညျးလို့ ပွောကွတယျ။ အဲဒါကို သဘောတူလား?)
(ကြှနျမ အသအေခြာ တော့ မပွောနိုငျဘူး….လယောဉျနဲ့ သှားရတာ အတျောလေး ငွီးငှစေ့ရာကောငျး နိုငျတယျ…. အမညျစာရငျးပေးပွီး အထုပျအပိုးအပျရတဲ့နရောမှာ တနျးစီရတာ….နိုငျငံကူး လကျမှတျ စဈဆေးတဲ့နရောကို ဖွတျသှားရတာ လယောဉျထှကျခှာဖို့စောငျ့ရတဲ့ဧညျ့ခနျးမှာ အကွာကွီး ထိုငျနရေတာ….အဲဒီနောကျ လယောဉျခရီးစဉျကလညျး သကျသောငျ့သကျသာမရှိတာ… ဟငျ့အငျး…ကြှနျမ သဘောတူတယျလို့ မပွောနိုငျဘူး)
all-in package / package holiday - အပြျောခရီးနှငျ့တညျးခိုခွငျးကိုပါ တဈပါတညျးဝယျယူနိုငျတဲ့အပြျောခရီး
breathtaking view - အလှနျတရာသာယာလှပသော ရှုခငျး
charter-flight - ပုံမှနျ အစီအစဉျနှငျ့ ပွေးဆှဲနသေော လယောဉျခရီးစဉျထကျပို၍ ဈေးသကျသာသော လယောဉျဖွငျ့ ခရီးသှားနညျး
check-in desk - လယောဉျကှငျးထဲရှိ မိမိခရီးစဉျအတှကျ စာရငျးပေးပွီး အထုပျအပိုမြားအပျခဲ့ရသောနရော
departure lounge - မိမိလယောဉျခရီးစဉျကို ချေါရနျအတှကျ စောငျ့ရသော နရော
far-off destination - အလှနျဝေးကှာသော နရောတဈနရော
to get away from it all - အလုပျမြားသော (သို့) စိတျ ဖိစီးမှုမြားနသေော လူနမှေုပုံစံကို ရှောငျရှားရနျ အပြျောခရီးထှကျခွငျး
guided tour - စိတျဝငျစားစရာကောငျးသော နရောမြားသို့ ကြှမျးကငျြသူက လိုကျ၍ ပွသခွငျးကို ခံရသော စံနဈတကဖြှဲ့စညျးထားသော ခရီးသှားအုပျစု
holiday brochure - အပြျောခရီးနှငျ့ တညျးခိုခွငျးပါ တဈပါတညျး ဝယျယူနိုငျသညျ့ အပြျောခရီးသှားခွငျးနှငျ့ပတျသကျတဲ့ အခကျြအလကျတှပေါ တဲ့ ခြောမှေ့ တောကျပတဲ့ စက်ကူဖွငျ့ ရိုကျထားသော လကျကမျးစာစောငျ
holiday destination - အပြျောခရီးထှကျသောနရော
holiday ofalifetime - နောကျထပျ ထပျပွီးသှားနိုငျဖို့ရာ အလားအလာမရှိသော ထူးခွားသညျ့ ပိတျရကျအပြျောခရီးတဈခု
holiday resort - လူအမြားကွီး အပြျောခရီးထှကျကွသော နရောတဈနရော
hordes of tourists - ခရီးသှားအုပျစုကွီးတှေ
local crafts - ဒသေမှ ထုတျလုပျသော လကျမှုပစ်စညျး။
long weekend - သောကွာ (သို့) တနင်ျလာ ပါသော ရကျရှညျသှားသညျ့ စနေ၊ တနင်ျဂနှရေုံးပိတျရကျ
out of season - အဓိက ပိတျရကျခရီးသှားရာသီ မဟုတျသော အခြိနျ
picturesque village - အလှနျလှပတဲ့ရှာ
passport control - သငျ့နိုငျငံကူးလကျမှတျကို စဈဆေးသညျ့ နရော
places of interest - ခရီးသှားမြားအတှကျ စိတျဝငျစားစရာကောငျးသော နရောမြား
wildlife safari - တောရိုငျးတိရိစ်ဆာနျမြားကို လလေ့ာ ရနျအတှကျ သှားရတဲ့ ပိတျရကျအပြျောခရီး၊ အဲဒါက အမြားအားဖွငျ့ အာဖရိကမှာ ဖွဈပါတယျ
self-calering - အစားအသောကျကို ကိုယျ့ဟာကိုယျ ဖွညျ့ဆညျး ရတဲ့ ပိတျရကျခရီးသှားခွငျး
short break - ရကျတိုပိတျရကျ အပြျောခရီး
to go sightseeing - ခရီးသှားမြား စိတျဝငျစားစမေဲ့ နရောမြားကို လိုကျလံ ကွညျ့ရှုခွငျး
stunning landscape - အလှနျသာယာလှပသော ကြေးလကျဒသေ
travel agent - ပိတျရကျအပြျောခရီးထှကျခွငျးအတှကျ ကွိုတငျ စာရငျးပေးသှငျးခွငျးကို အထူးဝနျဆောငျမှုပေးသောဆိုငျ
tourist trap - အလှနျမြားပွားလှသော ခရီးသှားမြား သှားရောကျ လညျပတျကွသော နရောတဈနရော
youth hostel - ဈေးသကျသာစှာဖွငျ့ တညျးခိုနထေိုငျစရာ နရော
http://www.ieltsspeaking.co.uk/ielts-holiday-vocabulary/ မှ IELTS Holiday Vocabulary ကိုဘာသာပွနျထားခွငျးဖွဈပါသညျ။
Permalink Reply by Zun Moe Pwint on December 19, 2015 at 16:34